UMangcobo uxwayisa abalandeli bakhe ukuthi bathathele phezulu i-Covid | Scrolla Izindaba
UMangcobo uxwayisa abalandeli bakhe ukuthi bathathele phezulu i-Covid
Umlingisi womdlalo Uzalo, uThandeka Dawn King obuye aziwe ngelikaMangcobo unxenxa abathandi beqembu ukuthi baziphathe kahle futhi bazijabulise ngendlela ngoba i-Covid-19 akulona ihlaya.
INelson Mandela Bay isiphenduke isizinda se-Covid-19 ezweni. Amathaveni namashibhi akulendawo athathwa njengabasabalalisa begciwane.
UMangcobo uthi akesabi ukuya e-Port Elizabeth ukuyojabulisa abalandeli bakhe.
NgeSonto uzonandisa endaweni yokucima ukoma e-Emalaydin & Masinga nase-butchery elokishini laseGovan Mbeki. Lokhu kulandela ukusebenza kwesonto eledlule ngabalingisi abalingisa naye Uzalo, uNkunzi noSbu ‘endaweni efanayo.
NgoLwesine ekuseni uThandeka utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi: “Abantu bayayithanda indlela engilingisa ngayo indima yami njengoMangcobo, futhi ngeke ngithi cha kubo uma abahleli bemicimbi bengibhukha ukuzojabulisa abalandeli bami. Lokhu kuzoba ukuhambela kwami ​​kwesibili kuleli dolobha kusukela ngowezi-2018.
“Ngikholwa ukuthi njengosaziwayo kufanele sihole ngesibonelo futhi sisize ekulweni nalesi sitha esingabonakali. Kufanele sikhuthaze abalandeli bethu ukuthi bagqoke izifonyo, baziqhelelanise nabantu, bahlanze amagciwane futhi bageze izandla njalo ngensipho.”
Ubuye wanxusa abalandeli bakhe ukuthi baqale baziphathe ngokuvikela ukushona kwabantu abaningi nomvalelo.
“I-Covid-19 akulona ihlaya. Abantu abaningi balahlekelwa yimindeni yabo kanye nabathandekayo babo nsuku zonke ngenxa yaleli gciwane. Nginabangane e-London abakumvalelo ngoba i-Europe ishaywe igagasi lesibili.
“Masiziphathe kahle futhi singaphumuli sengathi i-Covid-19 ayisekho. Kuyo yonke imibuthano yokuzijabulisa kumele kulandelwe le mithetho ukuze kuvikeleke abanye ekutholeni nasekusabalaliseni leli gciwane.”
Umthombo wesithombe: @ DawnThandekaKi4